Ny fepetra Amazon manolotra Prime Video amin'ny Apple TV | Avy amin'ny mac aho
Apple dia tsy maintsy mameno ny fepetra Amazon mba hahazoana ny fampiharana Amazon Prime Video ho an'ny Apple TV
Andro vitsy lasa izay Jeff Bezos, CEO an'ny Amazon, nanazava ny antony tsy amidy Apple TV ao amin'ny magazay Amazon sy ny antony Tsy misy ny Amazon Prime Video ho an'ny fitaovan'ny mpifaninana aminao.
Ankehitriny ny CEO dia mametraka ireo karatra ambony latabatra ary manambara fa tsy maintsy manatanteraka ny sasany i Apple fepetra ara-barotra azo ekena raha tianao ny mpampiasa Apple TV afaka manisa amin'ny Amazon Prime Video.
Ny fifandraisana misy eo Amazon sy Apple dia tsy sariaka velively, Na izany aza, tato anatin'ny volana vitsivitsy dia nihahenjana ny toe-draharaha teo amin'ny orinasa roa tonta noho ny fandavan'i Jeff Bezos tsy hampiditra fampiharana ny azy serivisy fahitalavitra amin'ny fangatahana ny Apple TV. Nandritra ny valan-dresaka farany natao izay dia nanazava i Jeff Bezos ny antony mahatonga azy ireo tsy hanaiky lembenana:
Rehefa mivarotra ireo fitaovana ireo izahay dia tadiavinay ho eo amin'izy ireo ny serivisinay ary ilainay miaraka amin'ny fepetra ara-barotra azo ekena izany. Azonao atao foana ny mampiasa ny Amazon Player amin'ny Apple TV, fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe, azontsika ampiana amin'ny teny ekena ve izany?
Amin'ity fanambarana ity, Bezos dia manondro ny vaomiera 30% amin'ny fidiram-bola rehetra azo tamin'ny alàlan'ny Apple, tahan'ny izay rindranasa rehetra izay manolotra fividianana an-tserasera sy fisoratana anarana toa an'i Netflix na Spotify tsy maintsy milefitra amin'ireo an'ny Cupertino afaka manolotra ny serivisiny amin'ny fitaovan'ny marika.
Fa maninona i Amazon no tsy te handray komisiona 30% ho an'i Apple?
Miorina amin'ny sisiny tombony kely indrindra miaraka aminao no iasanao, ka azo atao ve ny manome ny 30% amin'ny karamanao amin'ny alàlan'ny horonan-tsarinao amin'ny serivisy a loza mety tsy handray.
Tamin'ny faran'ny 2015 dia fantatray fa ny magazay dia fampivelarana ny fampiharana Amazon Prime Video ho an'ny Apple TV, Na izany aza, taorian'ny nandrasana nandritra ny 6 volana mahery, ny fanambaran'i Jeff Bezos dia manolotra izany Ireo mpampiasa Apple TV dia tsy maintsy miandry ho an'i Apple hanome fepetra ara-barotra azo ekena hahafahana mampiasa ity rindranasa ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Apple dia tsy maintsy mameno ny fepetra Amazon mba hahazoana ny fampiharana Amazon Prime Video ho an'ny Apple TV
Toa komisiona be loatra amiko io, avy amin'ny Apple.